China Bata Strongman sandbag fekitori uye vanotengesa | Feiqing
Yedu yekubata strongman sandbag inoitwa zvichibva pane yakasimba strong sandwich, isu tinogadziridza dhizaini kuti ishandise nyore. Iyi nyowani dhizaini inogadzira mubato strongman sandbag uine mamwe anobata emagetsi bhegi mashandiro. Unogona kubata, kusimudza, kufambisa rakasimba sandbag bhegi nyore nyore.Saga mabhegi anogona kudururwa obva azadziswazve pane imwe nzvimbo yekurovedza muviri, munda, paki, nezvimwewo, zvinoshanda seyakatakurika inotakurika Strongman maturusi ekushandisa matambi evatambi vechero ruzivo ruzivo.
Bata Strongman Sandbags anowanikwa mune 50lb-150lb saizi, unogona kusarudza saizi sezvaunoda.Iyo inogadzirwa ne1050D Cordura 100% zvinhu zvenaironi, YKK zipper. Sandbag roga roga rine bhegi rekuzadza rakasiyana riine zipi yekuwedzera uye kuvhara-uye-loop kuvhara- kuverengera zvinhu zvekuzadza zvinogara zvizere sezvo iwe uchishanda kuburikidza nehurongwa hwako. Strongman sandbag shell kuvhura neYKK zipper, inogona kudzivirira bhegi kuputika.
Ndapota Cherekedza: Kurema kunorema kweStrongman Bhegi kunoenderana nehukuru uye saizi yenhau iri kushandiswa. Dzimwe nhepfenyuro dzinogona kukonzeresa huremu hwese hwehombodo kuti huve hukuru kana kuti pasi pehurema hwehurema hunofungidzirwa Nekuda kwehunhu hwejira uye kushandiswa kwakatungamirwa, mabhegi eStrongman anogona kuwedzera nekufamba kwenguva nekushandisa. Pamusoro pezvo, aya mabhegi haana kufemerwa.
1.Color: nhema, tsvuku, uto remauto, bhuruu, yero, shava, camo camo, camo cima.
2.Material: 1050D Cordura, 100% nylon.YKK zipi
3.Dimension: 41 dhayamita kana 16 "
Kukura kweCustom: 50lb-150lb.
5.Separate Filler Bhegi.
6.Zipper uye Hook-uye-Loop Kuvhara
7. (Filler Chinyorwa Chisina Kuisirwa)
8.Custom logo yechinhu chero qty, kunge 1pc zvakanaka.
9.do yekudhinda logo, embroidery logo, yekusona logo.
Pashure: Wood Jerk Zvidhinha
Zvadaro: Rinorema basa sandbag-A
Bata Kudzidzisa Sandbag